ရီးရဲလျမကျဒရဈမှာ ကစားဖို့က သူ့ရဲ့အိပျမကျဖွဈတယျလို့ ထုတျဖျောပွောကွားလိုကျတဲ့ ယူနိုကျတကျကှငျးလယျလူ ပေါ့ဘာ – Myan Ball
ပေါ့ဘာက အိုးထရကျဖိုဒျ့မှာ စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးတာနဲ့ ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးမှာ ကစားရနျ အိပျမကျတဈခုရှိတယျဆိုပွီး ယူနိုကျတကျအသငျးက ထှကျခှာမယျ့ စကားကို အရိပျအမှကျပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ ပွငျသဈကစားသမားရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ကလပျအသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးဟာ ကုနျဆုံးရနျ (၁၀) လပဲ ကနျြတော့နတောဖွဈပွီး အသကျ ၂၇ နှဈအရှယျကစားသမားဟာ ယူနိုကျတကျအမှုဆောငျခြုပျ အကျဝုဒျဝပျက သူ့ကို စာခြုပျသကျတမျးတိုးရနျ မကမျးလှမျးသေးဘူးလို့ ဝနျခံပွောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပေါ့ဘာကို ပွီးခဲ့တဲ့ (၁) နှဈက ရီးရဲလျမကျဒရဈ အသငျးက ကွိမျဖနျမြားစှာ ကမျးလှမျးခဲ့ပမေယျ့ ကာလရှညျဒဏျရာ ရရှိနခေဲ့လို့ လှဲခြျောခဲ့ရပါတယျ။
ဒီရာသီမှာလညျး အိုးထရကျဖိုဒျ့ရဲ့ အဓိက ကစားသမားတဈယောကျဖွဈနပေမေယျ့လညျး ပေါ့ဘာဟာ ကွာသပတေးနကေ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွငျသဈလကျရှေးစငျအသငျးနဲ့ ပှဲအပွီးမှာ “ဟုတျပါတယျ၊ ဘောလုံးသမားတိုငျးက ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးအတှကျ ကစားခငျြကွပါတယျ။
ဒါက ကြှနျတေျာ့အတှကျလညျး အိပျမကျတဈခုပါ။ တဈနေ့ ဘာလို့ မဖွဈနိုငျရမှာလဲ? လကျရှိမှာတော့ ကြှနျတျောယူနိုကျတကျ မှာ ရှိနပွေီး အသငျးကို ခဈြပါတယျ။ ကြှနျတျောအသငျးဖျောတှလေို အသငျးအတှကျ အရာရာကို အကောငျးဆုံးပေးဆပျသှားမှာဦးမှာပါ” လို့ ပွောသှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်မှာ ကစားဖို့က သူ့ရဲ့အိပ်မက်ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဘာ
ပေါ့ဘာက အိုးထရက်ဖိုဒ့်မှာ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတာနဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာ ကစားရန် အိပ်မက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီး ယူနိုက်တက်အသင်းက ထွက်ခွာမယ့် စကားကို အရိပ်အမွက်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ်ကစားသမားရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းဟာ ကုန်ဆုံးရန် (၁၀) လပဲ ကျန်တော့နေတာဖြစ်ပြီး အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာ ယူနိုက်တက်အမှုဆောင်ချုပ် အက်ဝုဒ်ဝပ်က သူ့ကို စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန် မကမ်းလှမ်းသေးဘူးလို့ ၀န်ခံပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ့ဘာကို ပြီးခဲ့တဲ့ (၁) နှစ်က ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းက ကြိမ်ဖန်များစွာ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် ကာလရှည်ဒဏ်ရာ ရရှိနေခဲ့လို့ လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီရာသီမှာလည်း အိုးထရက်ဖိုဒ့်ရဲ့ အဓိက ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း ပေါ့ဘာဟာ ကြာသပတေးနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ ပွဲအပြီးမှာ “ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘောလုံးသမားတိုင်းက ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းအတွက် ကစားချင်ကြပါတယ်။
ဒါက ကျွန်တော့်အတွက်လည်း အိပ်မက်တစ်ခုပါ။ တစ်နေ့ ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ? လက်ရှိမှာတော့ ကျွန်တော်ယူနိုက်တက် မှာ ရှိနေပြီး အသင်းကို ချစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အသင်းဖော်တွေလို အသင်းအတွက် အရာရာကို အကောင်းဆုံးပေးဆပ်သွားမှာဦးမှာပါ” လို့ ပြောသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပှဲဦးထှကျမှာလညျး ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့တဲ့ ကဲလျဗကျလီဝငျ နဲ့အတူ ဝေးလျကို ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျ